November 2020 - MM Daily Life
ခဏတော့ငိုပါ…အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေ ဖတ်ဖို့
November 30, 2020 by MM Daily Life
ခဏတော့ငိုပါ…အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေ ဖတ်ဖို့ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့ သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ …။ အသဲကွဲတိုင်း ငိုနေစရာလား ငိုမ်ိရင်ခဏပေါ့ မျက်နှာထသစ် သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် စိတ်လက်ကြည်သာတဲ့နေရာကို ထသွားလိုက်မယ်။ နဂိုအတိုင်း အချစ်ကို ပြန်မရနိုင်မှတော့ ဘာလို့များ မျှော်လင့်တောင့်တ ငိုကြွေးနေရမှာလဲ …၊ လောကမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံး လူဟာ ကိုယ်ဖြစ်သင့်သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ လမ်းခွဲသွားလို့ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေစရာလား…၊ စိတ်ထိခိုက် ခံစားရရင် ခဏဆို လုံလောက်ပြီလေ …။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့အားအင်အသစ်တွေကို အမြန်ဆုံးမွေးယူပြီး လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေကြား ပျော်ပျော်ပဲ နေလိုက်မယ်။ ချန်ထားခဲ့သူထက် တစ်နေ့ သာရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်တွေကို … Read more
လက်မထပ်ခင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ လုပ်ဖူးထားသင့်တဲ့ အရာ(၄)ခု…
လက်မထပ်ခင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ လုပ်ဖူးထားသင့်တဲ့ အရာ(၄)ခု… ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် မချခင်မှာ အရင်ဆုံး သူနဲ့အတူ ပြုလုပ်ဖူးသင့်တဲ့ အရာတွေ ရှိနေပါတယ် …။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ဘာမှ ဂဃနဏမသိပဲ တွဲတာ လပိုင်းလောက်နဲ့ မင်္ဂလာခန်းမထဲ ဝင်လိုက်မိတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအိမ်ထောင်ဟာ နားလည်မှုပိုင်း အားနည်းနိုင်သလို၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြသနာတွေလည်း ရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ် …။ အခုလို ပြောလို့ အရင်က လူကြီးမိဘတွေ ပေးစားတဲ့အတိုင်း တွေ့ကြည့်ပြီး ယူလိုက်တာမျိုးတွေ ရှိနေတာပဲ၊ တစ်သက်လုံး အေးအေးချမ်းချမ်း နေသွားနိုင်ကြတာပဲလို့ ဆိုစရာ ရှိပါတယ်။ ဒါကို ပြန်မေးစရာရှိတာက ခုလို အိမ်က ဒီလူနဲ့ သင့်တော်တယ်ဆိုလို့ အိမ်ထောင်ပြုရာက အဆင်မပြေတာ၊ ဖောက်ပြန်တာ၊ နားမလည်တာတွေ ရှိကြရင်တောင် … Read more
သူ့ဘက်ကနေ သင့်အကြောင်းကိုပဲ တွေးနေတဲ့အခါ သင့်ဆီမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အရာများ… စိတ်ချင်းဆက်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးကြတယ်မလား။ စကားလုံးအဖြစ် ပြောပြမရပေမဲ့ စိတ်ထဲကနေ သိနေတာမျိုး၊ မမျှော်လင့် တစ်ခုတည်းကို တူတူလုပ်မိနေကြတာမျိုး၊ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ ရုတ်တရက် ဖြစ်သွားတဲ့ အပြုအမူ/ခံစားချက်မျိုး၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စကားပြောစရာမလိုပဲ နားလည်နေသလိုမျိုး၊ မျက်လုံးချင်းဆုံရုံနဲ့ သူ ဘာပြောလဲ ကိုယ်သိနေတာမျိုး ပေါ့ …။ ဒီလို အခြေအနေတွေကို ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါက စိတ်ချင်းဆက်တဲ့ သူတွေမှာပဲ ရှိတတ်သလို မသိစိတ်ကနေ သိတဲ့ အလိုအလျောက်အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင် သင်သိနေသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်အကြောင်း တွေးနေတဲ့အခါ သင့်ကို နှစ်သက်နေတဲ့အခါတွေမှာ သင့်မှာ ဒီလို လက္ခဏာတွေ … Read more
အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပဲ ညာပါ ရေနစ်သူကို လက်ကူပေးတဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပြီ ရေနစ်တဲ့သူကို ဝါးကူထိုးဖို့ စောင့်နေကြတာချည်းပါပဲ … ။ အမှားတွေ ရှိလာတဲ့အခါ အမှန်ပြင်ပေးဖို့ ဘယ်သူမှ စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူး အဲ့ဒီအမှားအပေါ်မှာပဲ ထပ်ထပ်ပြီး အပြစ်တွေ ရှာလိမ့်မယ် … ။ မြေနှိမ့်ရာ လှံစိုက်တာထက် ပိုဆိုးတဲ့ အဖြစ်တွေပေါ့ နိမ့်ကျနေတဲ့အခါ ဆက်ပြီး ချနင်းသွားမှာပဲ … ။ ဘယ်သူကမှ လက်ကမ်းပြီး ဆွဲတင်မနေတော့ဘူး သည်းခံရင် အနိုင်ပဲ ယူချင်ကြတာ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်ဆိုပြီး စာနာနားလည်ကြတာမဟုတ်ဘူး …. ။ အသူခံ လည်သူစားတဲ့ ခေတ်လေ ကိုယ်က ရိုးသားချင်သလောက် ကိုယ့်အပေါ် အသုံးချမယ့်လူတွေပဲ များတယ် …. ။ ကိုယ့်ထက် နဲနဲလေးသာသွားရင် မနာလို တိုက်ခိုက်မယ် … Read more
အရင်လိုပဲ ပြုံးနေပေမယ့် အရင်လို အသက်မပါတော့ဘူး
အရင်လိုပဲ ပြုံးနေပေမယ့် အရင်လို အသက်မပါတော့ဘူး အရင်ပြုံးဖို့ အရင်လို ပျော်နေဖို့လိုပါတယ် မလိုချင်တဲ့အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အခါ လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ ဘဝမှာ ပျော်အောင်နေဖို့ ခက်ခဲလာတတ်တယ်လေ ။ အရင်လိုပဲ ပြုံးနေပေမယ့် အရင်လို အသက်မပါတော့ဘူး ။ ဒဏ်ရာတွေကိုဖုံးပြီးပြုံးတဲ့အပြုံးက အနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်နေသယောင်ပေါ်နေတတ်တယ်လေ ။ ကိုယ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ဘ၀ ကိုယ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဘဝကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အသိဆုံးပါ။ နာကျင်နေပါလျက်နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်လို့ ညာရင်လဲ တစ်ဖက်က ယုံချင် ယုံနေတတ်တာပဲလေ ။ ကံကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အခါ မျက်ရည်လဲ ဝဲရတယ် ။ လူတချို့ထင်နေတဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေက ကျွန်မအတွက်တော့ ကံဆိုးခြင်းသက်သက်ပဲလို့ တွေးနေမိတာလေ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ငွေဆိုတဲ့အရာနဲ့လဲ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျဘူး ဂုဏ်တွေ ဒြပ်တွေနဲ့လဲ မဆိုင်ဘူး ကိုယ့်စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တာပါ ငွေပုံပေါ်ထိုင်ပြီး ငိုနေရတဲ့ လူတွေ … Read more
အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ စုံတွဲတိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ခံစားချက်များ…
November 29, 2020 by MM Daily Life
အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ စုံတွဲတိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ခံစားချက်များ… လောကမှာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ရှိကြပေမယ့် အချစ်စစ်ကို တကယ်ခံစားဖူးတဲ့ သူတွေကတော့ ရှားပါးလှပါတယ်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ လုပ်ယူလို့ ရတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ သင့်ချစ်သူကို ချစ်နေမိရင်တော့ အချစ်စစ်ကို ခံစားဖူးတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါပြီနော် …။ (၁) အပေးအယူမရှိဘူး” သင့်ရဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို သင့်ချစ်သူကို ပေးထားပြီးတဲ့နောက် သူ့ဆီက တူညီတဲ့ တန်ပြန်အချစ်မျိုး ရဖို့ သင်မျှော်လင့် မနေတော့ပါဘူး။ သင့်ဘက်က ချစ်နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန် ချစ်နေရရင်ကို ကျေနပ်နေမှာပါ …။ (၂) ဖြူစင်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှု” သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အပြုံးလေးတွေက သင့်ဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံး … Read more
ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့အရာ (၅) ခု…
ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့အရာ (၅) ခု… စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ အမှန်တကယ် ရူးရူးမူးမူးချစ်မိပြီဆို ချစ်သူအတွက် ဘာပဲလုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်မျိုးတွေအထိ ရှိလာတတ်ကြတာ ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအတူတူပါပဲ။ အခုတော့ ယောက်ျားလေးတွေ ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ပီး ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အရာ (၅) ခုကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော် …။ (1) ချစ်သူစကားကို နားထောင်တယ်” ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် သူတို့ချစ်ရတဲ့သူ၊ ချစ်သူရဲ့စကားကို သေချာ နားထောင်တယ်။ အဆုံးစွန် အထိ လိုက်လျောတတ်တယ် …။ သူတို့ ဆီကနေ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်တွေ ရယူနိုင်ပါတယ် …။ (2) … Read more
အတွင်းစိတ်ပုတ်သူတွေမှာ အများဆုံး တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်လေးများ
အတွင်းစိတ်ပုတ်သူတွေမှာ အများဆုံး တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်လေးများ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားကို ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ အပြင်မှာ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ ပုံစံကို ကြည့်ပြီး အတွင်းစိတ်ကို သိအောင် လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အတွင်းစိတ် ပုတ်ပြီး စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူပုံစံမျိုး ဟန်ဆောင်ထားတတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ အတွင်းစိတ်ပုတ်နေတဲ့သူ ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို ခွဲခြားလို့ ရတဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကတော့ အခုလိုပါနော်…။ (၁) ပူလောင်တတ်တယ် အတွင်းစိတ် ပုတ်တဲ့သူတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အချက်က ပူလောင်မှုပါပဲ။ သူတို့တွေက တခြားသူတွေ သူတို့ထက်သာတာမျိုးကို သဘောမကျသလို တခြားသူတွေကို အကောင်းမြင်ပေးတာမျိုးလည်း မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒီအတွက် သူတို့ဆီမှာ တခြားသူတွေကို မကျေနပ်တဲ့ အကြောင်းမျိုးတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ … Read more
မိန်းမသိပ်မဆန်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ သိထားရမယ့်အချက် (၅) ချက်
မိန်းမသိပ်မဆန်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ သိထားရမယ့်အချက် (၅) ချက် မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး။ တစ်ချို့တွေက မိန်းကလေးအရမ်းဆန်တယ်၊ နူးညံ့တယ်၊ ခံစားလွယ်တယ်၊ တစ်ချို့တွေကတော့ မိန်းကလေးသိပ်မဆန်ပဲ ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မိန်းမသိပ်မဆန်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုချစ်မိတဲ့အခါ သိထားရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လွယ်လွယ်ဖွင့်မပြတတ်ဘူး မိန်းမသိပ်မဆန်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေကို တဆာဆာပြောနေမယ့် သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်တာကိုလည်း ထုတ်မပြတတ်သလို၊ ချွဲတာတွေ၊နွဲ့တာတွေလည်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ပေးစရာရှိရင်သာ လုပ်ပေးလိုက်မယ်၊ တီတီတာတာ ပလီပလာတွေ မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ပြတ်သားတယ် မိန်းမသိပ်မဆန်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းပြတ်သားကြပါတယ်။ ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူး ဆိုပြီး ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းပြောတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းတွေအတိုင်း မနေနိုင်ရင် ပြတ်သားဖို့ ဝန်လေးတတ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းမချုပ်ချယ်တတ်ပေမယ့် မကြိုကတာကိုတော့ မလုပ်မိေ်စဖို့ … Read more
သင့်ကို အသက်အန္တာရာယ်ပေးနိုင်သော အပြုအမူ (၁၀) မျုိး
သင့်ကို အသက်အန္တာရာယ်ပေးနိုင်သော အပြုအမူ (၁၀) မျုိး ၁။ ငါးစားခြင်း အချို့ငါးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် မာကျူရီများရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အချို့မွေးမြူရေးငါးများကို ပိုးသတ်ဆေးသုံးထားသောကြောင့် နေ့စဉ်စားသုံးမိပါက သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ရေနွေးအိတ်သုံးခြင်း ရေနွေးအိတ်များကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ပလတ်စတစ်မျိုးနှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် ကြာရှည်အသုံးပြုပါက သင့်ကို ကင်ဆာရောဂါများ၊ ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ် ပျက်ဆီးမှုနှင့် အခြားဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ၃။ သွားကြားထိုးခြင်း သွားကြားမထိုးခင် ဖြန်းထားသော ဆေးရည်များက ပျက်ပြယ်ရန်ခက်ခဲပြီး သင့်ကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ကြာရှည်သုံးစွဲမိပါက သင့်အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ခက်ခဲစေပါတယ်။ ၄။ သစ်သီးဖျောက်ရည်သောက်ခြင်း သစ်သီးခြောက်များ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များက ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်ပြီး သင့်ကျောက်ကပ်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် အာရုံကြော ပျက်စီးမှုများကို ဦးတည်စေနိုင်သည့်အပြင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေပါတယ်။ … Read more